Hidhamtoonni Siyaasaa Nyaata Lagachuun Mormii Dhageessisan
Wiixata, Guraandhalaa 08, 2016 Local time: 06:40
Paartiin tokkummaa dimokraasii fi haqaa hidhamtoota sammuu ti kan ittiin jedhee fi kanneen mana hidhaa qaallittii keessatti argaman nyaata lagachuun mormii isaanii geggeessaa kan jiran ta’uu ibse.Mormii kana kan dhageesisanis miidhaa isaan irra ga’e qaamni isaaniif ilaalu dhabamuu isaaf ta’uu paartiin kun beeksisee jira jechuun Meleskachoo Amhaa gabaaseera. Paartiin kun hidhamtoonni nageenya isaaniif kan sodaachisan yakkawwan hedduun irratti raawwataa jira jechuu dhaan ibsa barreeffamaan kaleessa baaseen himatee jira. Galmeelee mana hidhaatiin argadhe jedhe tuquu dhaanis hidhamtoota kana irra miidhaa ga’e jedhes tarreessee jira. Kana keessaas murtiin utuu hin kennamin turuu isaa, angawootaa fi poolisoota mana hidhaa sanaan kan irratti raawwatamu gocha farra namoomaa fi dhiibbaa isaan irra kaa’an ka jedhu of keessaa qaba ibsi sun.
MP3 tuquun gbaasa guutuu dhaga'aa